DOWNLOAD ADOBE READER N'EFU NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Teknụzụ na ngwaọrụ nke oge a na android na-ekwe ka flagship na ọbụna n'etiti mmefu ego ngwọta na-asọmpi na ọnụ ala ọkachamara foto ngwa. Na ngwanrọ maka nhazi foto na smartphones na mbadamba na-achọpụta nhọrọ nhọrọ desktọọpụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ gaghị emetere ha na usoro ọrụ. Onye dike nke nyocha a, Snapseed, sitere na otu ìgwè nke ndị editọ foto.
Nyere ndị ọhụrụ aka
Ndị okike nke ngwa ahụ lekọtara onye ndu maka ndị na-amalite. Iji jiri ya, pịa ihe "Ozi bara uru" na ala nke windo nke Snapapsid.
E nwere ihe omumu ihe di n'ime Intanet, tumadi n'ime usoro vidiyo. Ha ga-aba uru ọ bụghị naanị maka ndị nmalite, kamakwa maka foto ndị nwere ahụmahụ - ha nwere ike ịchọta ụzọ ị ga-esi gbanwee foto gị n'ime ezigbo ụlọ ọrụ.
N'adịghị ka Retrica, Snapsid amaghị otú e si ewe foto n'onwe ya, mana o meela nhọrọ ndozi maka foto ndị mechara.
Ngwaọrụ ahụ nwere ọgaranya ma nwee ike nke ukwuu n'aka aka nri. Ngwaọrụ ndị a na-enye gị ohere ọ bụghị naanị idozi ntụpọ dị na ihe oyiyi ahụ, kamakwa iji meziwanye àgwà ha dum. Ọrụ a ga-aba uru dị ukwuu maka ndị nwe ngwaọrụ site na igwefoto teknụzụ dị mma, mana software anaghị arụ ọrụ mgbe niile.
Nyochaa ngbanwe nke usoro
Otu nhọrọ na-adọrọ mmasị nke Snapapsid bụ ohere nke nlele site na nkwụsị nke mgbanwe ndị dị na foto ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ mmetụta dị njọ ma ọ bụ ihe anaghị adabara onye ọrụ ahụ. Site na nchịkọta nhọrọ a, enwere ike ịgbanwe ma ọ bụ ehichapụ ya.
O doro anya na otu ihe dị mfe ma dịtụ na-arụ ọrụ na ntanye na Photoshop, ọ bụ naanị ihe niile dị mfe karịa na nke doro anya.
Nzacha na ike ha
Dị ka akwaazụ Retrica, Snapseed nwere ike itinye ihe nzacha na ihe oyiyi.
Ọ bụrụ na nke mbụ, a na-etinye ndị nzacha ahụ "na ada", n'oge ziri ezi, n'oge nke abụọ ha na-etinye aka na foto ahụ a gwụchara. Ọnụ ọgụgụ nke ọdịiche dị iche maka Snapspeed dị ntakịrị karịa Retrica, ọ bụ ezie na ha nwere nhọrọ ntụrụndụ dị mma.
Ekele maka ha, foto ndị yiri ka ha enweghi nke ọma na-abanye n'ime ndị na-achọ mma n'ime nanị otu ụzọ.
Lelee data EXIF
Akara nke Snapseed bụ nlele nke metadata nke foto - ọnọdụ na oge nke agbapụ, nhazi GPS na njirimara teknụzụ nke ngwaọrụ nke e weere foto ahụ.
A na-ewukarị ya na ọtụtụ ngwa ngwa ngwa ndị ọzọ na-amaghị otú e si etinye EXIF. Snapsid nwere ike ịba uru n'ịchọpụta ebe na oge, ebe na mgbe a weghaara oge a ma ọ bụ oge ncheta ahụ.
Ebufe weghaara ihe oyiyi
Enwere ike ime ka Snapseed rụọ ọrụ iji zọpụta ihe nhazi - faịlụ mbụ ejighi edegharị ya, ọ na-emepụta ihe ediri edezi.
Ma haziri ohere a iji chekwaa ya na ndabara ndabara, ya onwe ya - enwere ike ịgbanwe nke ikpeazụ na menu n'okpuru "Ntọala".
E nwere ihe dị ntakịrị - nani àgwà na ogo nke onyinyo ahụ. E debere aha faịlụ n'oge a na-echekwa ya.
Ngwa bụ kpam kpam na Russian;
Ọrụ niile dị maka n'efu;
Ike ma n'otu oge ahụ dị mfe ịmụta;
Ikike ime ihe ọma-gee ntị na nhazi nke onye ọ bụla.
Long na-azọpụta ihe nhazi.
Snapseed bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkachamara ọkachamara na ọbụna foto ndị nwere ahụmahụ anaghị ajụ ịjụ. Ndị mbido ga-ahụ ya mfe ma rụọ ọrụ.
Download Snapseed maka n'efu